၆နှဈကွာတှဲလာတဲ့ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့နောကျကှယျမှာ ယှနျးယှနျးနဲ့ ဖောကျပွနျနတေဲ့ စညျသူဝငျး – Cele Lover
အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနတေို့ငျး messenger ကနေ အဲ fan တှဆေဲတာနတေို့ငျး ခံခဲ့ရပမေဲ့ အပွုံးမပကျြ သီးခံပေးခဲ့တယျစစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုငျးပေးစားပီး ကိုယျ့ဟာကိုနတောကိုလဲ သပျသပျကွီးတှဆေဲခံရတာကို ကိုယျ့ဘကျမှာမရှိပဲ အောငျမွငျမှုမှာသာယာနခေဲ့လို့ ဘာတခှနျးမှမပွောပဲ
လှတျပေးခဲ့တယျ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျနကွေရအောငျဆိုပီး Jan31 မှာစပွတျသှားတယျ အဲထဲက တောကျလြှောကျဖုနျးတှဆေကျ တောငျးပနျ အိမျတှလော သှားလရောလိုကျပီး ပွုပွငျပါ့မယျ ပွောငျးလဲပါ့မယျ မရှိပဲ မနနေိုငျပါဘူး ပါးစပျကတောကျလြှောကျ ပွောတယျနျော သူတို့စကားပွောပုံအရဆိုရငျ နငျတို့ စကွိုကျတာ FEB17 တဲ့
ရှံလို့သတေော့မယျ ငါကဖွတျလို့ ငါနဲ့မခှဲနိုငျလို့ နှဈသိမျ့ပေးတာတဲ့ ရိုငျးရိုငျးပွောရရငျ ဟိုဘကျကတယောကျကလဲ သိရကျသားနဲ့ဖွဈကွတယျ ဒီကွားထဲနငျတို့တှဘေယျလိုတှေ ဖွဈဖွဈငါနဲ့မဆိုငျလို့ သီးခံပေးနိုငျသေးတယျ အခုတော့ ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆိုပီး ငါ့မှေးနပေီ့းတော့ ဆုံးဖွတျကွတယျ
အဲဒီထိကိုး ဟိုဘကျကမိနျးမက မှေးနမှေ့ာသခြောလုပျပေးဦး အဆငျပွလေား ဘဘေီကရတယျနျောဆိုပီး ပွောနပွေတာ အောကျတနျးကလြိုကျကွတာ .. ငါမသိရငျဘယျခြိနျထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုကျပီး နငျတို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe
ခရီးမှာပြျောခဲ့နျော ဘာဝယျခဲ့ရမလဲနဲ့ ဖွဈနကွေတာ ဘယျလိုစိတျနဲ့လဲဟမျ?? ငါနဲ့ရှိနပေီး 9months anniversary တဲ့ စိတျဓာတျတှကေ ရှကျဖို့ကောငျးလိုကျတာ ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆို ဖွတျလေ မဖွတျပဲ ၂ ယောကျလုံးသိရကျနဲ့ ခှေးဇာတျခငျးကွတာ .. ငါလဲ မဆှဲချေါထားဘူး နငျ့ဘာနငျငါနဲ့မခှဲနိုငျဘူးဆိုပီး ပွနျလာတယျ ပီးတော့ ဖောကျပွနျတယျ ..
ဒီကွားထဲ ဝရမျးပါလို့ပွေးရတယျ ကိုဗဈဖွဈတယျ ပွတျနတောတောငျ လကျကနျြသံယောဇဉျနဲ့ ငါ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံးအကုနျလုပျပေးခဲ့တယျ သူငယျခငျြးတှကေ နငျအမှတျမရှိဘူးလားပွောတာတောငျ ကာကှယျပေးခဲ့တယျ နမေကောငျးရငျတောငျ ဆေးစားစရာလိုအပျတာတှသှေားပို့
ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တယျ ဒါတှပွေောနရေတာ နာမညျကောငျးယူနတောမဟုတိဘူး နငျ့မိသားစုနငျ့အသိုငျးဝိုငျးအကုနျလုံး ငါဘယျလောကျကောငျးလဲ အသိဆုံး ၆နှဈ တခါမှခပြွပီး
အစထဲက သိခဲ့ရငျ ပွနျတောငျလကျမခံပေးဘူး ရှံလှနျးလို့ တယောကျကလဲ အသဲသနျပွနျလာခငျြတယျ နောကျတယောကျကလဲ အဲဒါကိုလကျခံပေးပီး ကွိတျပီးဖွဈနကွေတယျ
စိတျဓာတျတှကေ အောကျတနျးကလြှနျးလို့ အျောဂလီဆနျတယျအမကတော့ ဟနျမဆောငျတတျသလို two faced လဲမလုပျတတျဘူး အရှိတိုငျးကို လူတိုငျးကိုစိတျရငျးနဲ့ပဲဆကျဆံဘူးတယျ
အခုတော့ ပကျသကျမိခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပါ ရှံတယျ နိုငျငံရေးတှဖွေဈနတေဲ့ကွားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှကျဖွဈသှားစလေဲတောငျးပနျပါတယျ ဒီလို
RS ထဲက အရမျးရုံးထှကျခငျြနပေီမို့ပါ မိုကျရိုငျးနတောတောငိ လကျမလှတျပေးနိုငျကွပဲ ဆကျပီးမိုကျရိုငျးတာတှခေံနရေလို့ပါ လကျလှတျပေးပါတော့ တောငျးပနျပါတယျ
၆နှစ်ကြာတွဲလာတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ယွန်းယွန်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စည်သူဝင်း
အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံနေ့တိုင်း messenger ကနေ အဲ fan တွေဆဲတာနေ့တိုင်း ခံခဲ့ရပေမဲ့ အပြုံးမပျက် သီးခံပေးခဲ့တယ်စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုင်းပေးစားပီး ကိုယ့်ဟာကိုနေတာကိုလဲ သပ်သပ်ကြီးတွေဆဲခံရတာကို ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိပဲ အောင်မြင်မှုမှာသာယာနေခဲ့လို့ ဘာတခွန်းမှမပြောပဲ
လွှတ်ပေးခဲ့တယ် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ်နေကြရအောင်ဆိုပီး Jan31 မှာစပြတ်သွားတယ် အဲထဲက တောက်လျှောက်ဖုန်းတွေဆက် တောင်းပန် အိမ်တွေလာ သွားလေရာလိုက်ပီး ပြုပြင်ပါ့မယ် ပြောင်းလဲပါ့မယ် မရှိပဲ မနေနိုင်ပါဘူး ပါးစပ်ကတောက်လျှောက် ပြောတယ်နော် သူတို့စကားပြောပုံအရဆိုရင် နင်တို့ စကြိုက်တာ FEB17 တဲ့
ရွံလို့သေတော့မယ် ငါကဖြတ်လို့ ငါနဲ့မခွဲနိုင်လို့ နှစ်သိမ့်ပေးတာတဲ့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဟိုဘက်ကတယောက်ကလဲ သိရက်သားနဲ့ဖြစ်ကြတယ် ဒီကြားထဲနင်တို့တွေဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်လို့ သီးခံပေးနိုင်သေးတယ် အခုတော့ ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပီး ငါ့မွေးနေ့ပီးတော့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်
အဲဒီထိကိုး ဟိုဘက်ကမိန်းမက မွေးနေ့မှာသေချာလုပ်ပေးဦး အဆင်ပြေလား ဘေဘီကရတယ်နော်ဆိုပီး ပြောနေပြတာ အောက်တန်းကျလိုက်ကြတာ .. ငါမသိရင်ဘယ်ချိန်ထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုက်ပီး နင်တို့က ငါ့ဘေးမှာထားပီး miss u koko love u babe
ခရီးမှာပျော်ခဲ့နော် ဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့လဲဟမ်?? ငါနဲ့ရှိနေပီး 9months anniversary တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆို ဖြတ်လေ မဖြတ်ပဲ ၂ ယောက်လုံးသိရက်နဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းကြတာ .. ငါလဲ မဆွဲခေါ်ထားဘူး နင့်ဘာနင်ငါနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုပီး ပြန်လာတယ် ပီးတော့ ဖောက်ပြန်တယ် ..
ဒီကြားထဲ ဝရမ်းပါလို့ပြေးရတယ် ကိုဗစ်ဖြစ်တယ် ပြတ်နေတာတောင် လက်ကျန်သံယောဇဉ်နဲ့ ငါ့ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံးအကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ် သူငယ်ချင်းတွေက နင်အမှတ်မရှိဘူးလားပြောတာတောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ် နေမကောင်းရင်တောင် ဆေးစားစရာလိုအပ်တာတွေသွားပို့
ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ် ဒါတွေပြောနေရတာ နာမည်ကောင်းယူနေတာမဟုတိဘူး နင့်မိသားစုနင့်အသိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံး ငါဘယ်လောက်ကောင်းလဲ အသိဆုံး ၆နှစ် တခါမှချပြပီး
မပြောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါက်ပြန်ဘူးဘူး နင့်အတိတ်တွေလဲ စိတ်မဝင်စားအကုန်အကောင်းပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တွဲခဲ့တာ အခုတော့ ရင်နာလွန်းလို့
Waveထဲ နင်တို့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေလဲ မသိဘူး စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး ပြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ .. ပြန်လက်ခံပေးတဲ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပျက်နေကြတာ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရက်တွေပဲ
အစထဲက သိခဲ့ရင် ပြန်တောင်လက်မခံပေးဘူး ရွံလွန်းလို့ တယောက်ကလဲ အသဲသန်ပြန်လာချင်တယ် နောက်တယောက်ကလဲ အဲဒါကိုလက်ခံပေးပီး ကြိတ်ပီးဖြစ်နေကြတယ်
စိတ်ဓာတ်တွေက အောက်တန်းကျလွန်းလို့ အော်ဂလီဆန်တယ်အမကတော့ ဟန်မဆောင်တတ်သလို two faced လဲမလုပ်တတ်ဘူး အရှိတိုင်းကို လူတိုင်းကိုစိတ်ရင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံဘူးတယ်
broken family ကလာလို့ မေတ္တာငတ်လို့ တယောက်ထဲဘဝမှာဆိုပီး တွယ်တာခဲ့တယ် တယောက်ထဲရုန်းကန်ရလို့ အနားမှာကိုယ့်ကို ချစ်ရင်ပီးရောဆိုပီး တခြားဘာမှ မလိုအပ်လို့ တွယ်တာခဲ့မိတယ်
အခုတော့ ပက်သက်မိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ ရွံတယ် နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှက်ဖြစ်သွားစေလဲတောင်းပန်ပါတယ် ဒီလို
RS ထဲက အရမ်းရုံးထွက်ချင်နေပီမို့ပါ မိုက်ရိုင်းနေတာတောငိ လက်မလွှတ်ပေးနိုင်ကြပဲ ဆက်ပီးမိုက်ရိုင်းတာတွေခံနေရလို့ပါ လက်လွှတ်ပေးပါတော့ တောင်းပန်ပါတယ်
Previous Article မွနျမာပလာဇာမှာဖွဈတဲ့ လူငယျတှကေိစ်စကို ဒဲ့ဝဖေနျထောကျပွလိုကျတဲ့ အကယျဒမီရဲအောငျ
Next Article သူ့ရဲ့ကိုယျရေးကိုယျတာ ကိစ်စတှနေဲ့ပတျသတျပွီး ပရိသတျတှကေို တောငျးပနျ လိုကျတဲ့ စညျသူဝငျး